Indlela bajwayelane uyintombazane, uma ungalala unamahloni? Kulesi sihloko uzothola impendulo yalo mbuzo.
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi kukhona yini okungazuzisa okulula: ukubazi nomunye. Kodwa eziningi guys ayaqala ukuba amantombazane unamahloni, namahloni, hhayi ukuthola amazwi afanele. Kodwa ngeke lwaba neengcezu iduna nensikazi ukwehlukanisa kusuka komunye nomunye. Ngakho-ke kuyadingeka ukwazi ukuthi ukuhlangabezana nentombazane, uma unamahloni. guys abanamahloni badinga ukwazi ukuthi amazwi kufanele wathi kuqala ukuthi ntombazane ethakazelayo. Kodwa akukho lutho kulula kuka ukuqala sawubona. Futhi asikho isidingo esabe ukuthi ngeke ukulalela noma abatholi izihloko esingakhela kuyo ingxoxo yethu.
Njengoba insikazi, noma unamahloni? Udinga ukwazi imithetho embalwa. Okokuqala, kufanele uthole izizathu ukukhathazeka kwabo, ufunde iyashesha ekuxhumaneni ezinganeni. Uma kukhona eminye imibuzo, nje ukuthola izimpendulo. Ehluleka - kukhona abanye. Ekuqaleni ingxoxo udinga uncoma intombazane. Yini ukukhuluma into ukunakekela kwakhe? Funda ukuthi ungaqala izithakazelo interlocutor, mhlawumbe kuzoba ezivamile. Ezwa ehlanganisa, kufanele azame ukwenza zokuxhumana lula. Sikwazi ukukhula ubudlelwano obala ebunganeni ku okungaphezu kwalokho. Into esemqoka kunoma iyiphi ukuphola nobudlelwano ekuseni - ngokwemvelo. Ithi amazwi enhle, ngikhale mayelana nelanga elikhanyayo futhi uthando nganoma yisiphi isikhathi - kungenza guy efiseleka kakhulu.
Ukuthola in inethiwekhi - okunye okukhulu
Uma Nokho, yobunzima okusezingeni eliphezulu, futhi banqobe ngokushesha ehluleka, ungaqala ingxoxo nge-Internet. Uma konke kwenzakala, ukwazana sokuqala senzeka, kepha akukho ukwenza, akukho ukuxhumana ezithakazelisayo, ngakho-ke, ukuze uhlale nje abangane bese uqhubeka ukufuna umphefumulo wakho womshado. Kulokhu, udinga ukuba alungiselele yokuthi umbuzo evamile, "Ungazibona yini nabo?" Izimpendulo amantombazane kungaba ezihlukahlukene kakhulu. Umuntu shy kufanele ulungele noma yiziphi isiphetho. ezahlukeneyo eziningana amantombazane asabela ngayo ibhekisela sobala phambili ubuhlobo okumelwe icatshangelwe. amantombazane inesizotha futhi ehlakaniphile ngokuvamile basabela ukuthi bayamangala uzokwakhiwa yilokho okwenzeka. Girls abafisa ukushada, hhayi ukuthola ezimnandi ezicini zonke indoda ukuhlangabezana kancane ngesibindi ukuthi ngingathanda sibheke passport yakho.
Lady nge amahlaya babevunyelwa ukuba bahlangane kuphela uma umuntu enikeza ebukekayo. Girls nokukhulumisana ngokukhululekile ngesikhathi esisodwa bangase bathi yasekuqaleni: "Angifuni ukuba uthi" cha ", kodwa manje angifuni ukuqamba amanga." Ngu iyiphi i-akhawunti udinga sokulungiselela kusengaphambili futhi ungesabi ngaye.
Nokho, lokho manje okwaziwa ukuthi uzothini emhlanganweni wokuqala, futhi kuphi futhi kanjani ungakwazi bajwayelane intombazane? It kungatholakala ebusuku amaqembu, wokujola ku-inthanethi noma zokuxhumana sites. Girls abafuna abangane abasha, woza kuma-nightclub. Isimo kwalezi zikhungo buthakathaka, abaningi kuyenze ukwenza ngokugqamile. Kodwa ukuthola intombi akulula kangako. umuntu onamahloni eyayizophazamisa inqwaba izivakashi the club. Leli qiniso akufanele sokunaka. I club uya izethameli, bonke umatasa nezinkinga zabo siqu. Sekuyisikhathi ukuzicabangela. Udinga ukubheka okuhle, ukuze bakwazi ukudansa, ukuhambisana nayo yonke imithetho yokuziphatha, ukuze bakwazi ivelele kahle phakathi nabanye abafana. Kodwa inselele eyinhloko osasihlalele. I club besilisa abaningi, ukuze intombazane zakho ozithandayo ongacela ezingaphezu kweyodwa umnumzana - mncintiswano ezinzima.
Uma kubonakala sengathi le ndlela ukuthi uphola kunzima ke wenzani? Kuphi futhi nini ungathola kangcono le ntombazane? Lokhu inkinga isixazululekile kuphela ngosizo Inthanethi. Ukuqomisana sayithi wadala ngoba kukhona ezihlukahlukene amantombazane, ligunya lekukhetsa kabanti. Akubona bonke contender kuhluke ubuhle ekhethekile, kwabanye, le nsiza kuyoba kwethemba ukushada.
Ubuhlobo kuyoba isheshe futhi kube lula, uma ngabe umuntu has ikhasi sakhe kunethiwekhi "VKontakte". Ungakwazi ukuxhumana, ubone izithombe amantombazane ukuze ufunde mayelana nemisebenzi yabo yokuzilibazisa kanye nezithakazelo.
Ukujola amantombazane engenzeka emgwaqeni, enxanxatheleni yezitolo, ebhishi, kuleli paki. Labo ngifuna ayikwazi ebizwa ngokuthi zokufuna kakhulu. Ingabe kukhona amantombazane amaningi. Ngakho-ke, kungenzeka umuntu onamahloni amahloni zokwenqaba, futhi bonke abantu babe nalolu lwazi zizokwenzeka phambi kwezinye contender, okuyinto guy namahloni akuyona ncamashi efanelekayo eyozama inhlanhla okwesibili.
Ukujola amantombazane kungenzeka "ku amaziyo." Leli akulona tautology, sikhuluma amaqembu kanye zokuzalwa abangane babo ezinhle. Njengomthetho, le mibuthano merry ngempela ukuhlangabezana amantombazane olulodwa. Inani kulezi manene guys kakade lapho, ngoba abangane. Ngasinye ungenza amaziyo lokuqala nawe like ethile ngesicelo le nsizwa. Isinyathelo sokuqala kuyothathwa. Manje kulayini kuphela ezimbili ahlangana naye ephathini kwendoda nowesifazane. Ukuze iqembu zonke bebodwa, azikho abangabazi. Ngakho-ke, ithemba inqobile kakade. Kulokhu-ke kuyadingeka ukuba bandise kwesiyingi abazana naye, ngokuvakashela izenzakalo ezihlukahlukene kakhulu. Udinga ukuba asebenzayo, ukuya rink, ukuba khona amakhonsathi kanye lokwentiwako, ukuhamba emoyeni opholile. Phela, lutho ukufika, futhi akukho amanzi agobhoze.
lapho beya ezifundweni zabo
Jwayelana intombazane lapho umfana abaqeqeshwa ekolishi noma isikhungo, kalula kakhulu. Lapha yena umi eduze isheduli, ungakwazi ukwandisa futhi basibuze ukuthi kuye kwenziwa izinguquko imibhangqwana lanamuhla. Ngakho, izwi nezwi, kukhona lokho ongakusho uma behlangana intombazane, ucele uhlaka noma uphakamisa owakho ahambe emhlanganweni we Yiqiniso. Njengoba ungase ucabange, ungacabanga izizathu eziningi.
Ithimba emsebenzini uthanda ukuhlangana intombazane? Izibonelo phezu: ukucela izinto zokubhala, ukuya cafe, hlala phansi etafuleni ukuze esinye sezikhonzi, futhi ufisa ujabulele ukudla.
Uma umfana othanda ukudansa kancane, kungaba ukuya emakilasini iqembu umdanso. Ngokuba ukuthuthukiswa izinyathelo eziningi, ikhanda Hlukanisa abahlanganyeli bahambe ngababili. Lapha futhi kungadingeki ukuba ulahleke ukuthola amagama afanele. Kulokhu, zifike umusho banal: "? Kungenzeka ukukuhlangabeza" Ngala mazwi, ungaqala ukuphola ejimini, okuyinto futhi eze la mantombazane. Uma ekamelweni singakutholi inketho oyifunayo, khona-ke kufanele azame uvakashele isigaba club-yoga.
Uma umfana uthi, "Ngifuna ukuba simazi intombazane," futhi ngesikhathi esifanayo ungenzi lutho, cishe ngeke beze kuye ngokwabo. Kufanele ngokushesha uzithola yinto izithakazelo ezifanayo. Manje lokhu akuyona inkinga kuya wokuzilibazisa ofanayo kungasiza emsebenzini olwengeziwe. Ngokwesibonelo, awusebenzi liphazamisane ulwazi ezinye izilimi futhi ikhono ukushayela imoto? Futhi yiso kanye izifundo ezifana silotshwe amantombazane amaningi amahle futhi uhlakaniphile. Kuyoba yinto isikhathi esihle ukwenza ujwayelene nabantu ezintsha.
Ngezinye izikhathi kunzima ukuqagela lapho kuthanda nengxenye yakho, oyokuba kulo mhlangano kwesibhamu: epaki, ogwini, endaweni cafe. Kunoma ikuphi, udinga unakekele kakhulu ngokubukeka kwabo. Phela, le ntombazane futhi kufanele bakhethe, futhi uma phambi kwamehlo akhe avele nechosany unshaven, kubi ukunuka insizwa jeans rumpled - ukuhluleka wanikeza.
Impumelelo bungatholakala uma umfana kwakuyozuzisa ukugqama esixukwini. Nezingubo kufanele kube okukhethekile, ngisho noma akusiyo eqolo. Kufanele ukugcizelela ubuntu.
Imisho ngenxa yothando
Owesifazane inzalo, akunandaba ukuthi bathini. Kubalulekile - njengoba isisho.
Kuyaqondakala ukuthi le nsizwa kumele kube "ezenziwe ekhaya" kusukela okuyinto ukuqala ukuthola:
- Girl, umuhle kangaka ukuthi akunakwenzeka ukuba abadlula ngendlela.
Ngemva kwalezi amazwi nkosazana esencane ngiyibonga futhi ngeke ulalelisise engumngane lomkhumbi olamandla ongedluli. Enye inguqulo ye Emshweni wokuqala, oqala ncamashi amaziyo:
- Ingabe unayo ezinye izici ezithakazelisayo kakhulu. Ngifuna ukuxoxa futhi mhlawumbe ufunde kabanzi mayelana nawe.
Ungakwazi ngisho ngokuqondile ukhulume ngayo bajwayelane amantombazane ukuthi lokhu umfana akuyona specialist kunzima kangakanani. Ngeke ushiye lo engaphenduliwe izono. Lapha futhi kwakungekho isihloko sokuqala ingxoxo.
Ungaba ngempela ziqondile futhi ukutshela intombazane ukuthi uyazithanda. Ngakho-ke, kwakukhona isifiso ukuza futhi zizihlanganise nabantu. A phambili ingxoxo kungaba indaba ngawe nangomndeni mayelana intshiseko, umsebenzi nezinye izinto ezifuna isikhathi. Ngenxa yalokho, intombazane kuyodingeka uqale indaba ngokwayo.
Ngaphezu kwalokho, Indoda kudingeka yazi ngalokho noma kunjalo asikwazi ukukhuluma njengani intombazane.
Indoda akufanele kube trite, hackneyed ethi mazwi: "Sawubona! umama wakwakhe yakho ayidingeki? "Futhi sengathi. Awukwazi ukusebenzisa i-silly uhlobo izifanekiso: "Uphi-Eiffel Tower? Futhi lokho edolobheni lokhu? "
Yiqiniso, le nsizwa akazange asheshe kahle isayensi, abazi amantombazane namahloni. Ngoba konke iza nakho. Wena nje kufanele Tune yokuthi intombazane uthanda, hhayi umka-uMongameli noma Queen of England. Ungishiya umuntu ovamile, njengabo bonke abasondela. Kodwa le nsizwa akaphelelwa amandla yokukhuluma lapho sisebenzelana udadewenu noma umama wakhe. Kufanele kube lula ngaye ukuba abe nobuhlobo inqubo ingxoxo kanye nokuxhumana. Ezwe ojatshuliswa yiwo wonke nakho besabe, efana le nsizwa. Yena uyesaba ukutshela noma iyiphi umbhedo, bheka iwubuphukuphuku. Futhi ukwesekwa ezibalulekile uma uhlangana nomuntu omusha.
Kunoma isiphi isimo kubalulekile ukugcina imithetho okubhekwa. Ukwamukela othile ukuba ngivuke, indoda kufanele ngaso sonke isikhathi atshele owesifazane amazwi okuqala, "ngiyeke ngizethula." Uma wabona ngesandla eseluliweyo, ke ngempela kulandela shake, uzodinga ukubheka umuntu emehlweni umamatheke.
Imithetho ukuxhawula wamukelekile efanele, iqoqo lamagama okufanele ukungezwa elula "sawubona" noma ngokuthi "yamukela" - konke ebekwe imithetho yokuziphatha ukuthi bayakufanelekela ukufunda wonke umfana self-ukuhlonipha. Kuyoba nenzuzo ukuze lihlukaniswe zonke. Chivalry namanje akekho uvinjelwe. Noma yimuphi intombazane Kungaba mnandi, lapho phambi komnyango wakhe evulekile, ngemuva. Ukuze ukulungele ngokugcwele futhi wazi kanjani ukuhlangabezana nentombazane, uma sinqikaza, kufanele usebenze ngokwakho. Khona-ke akudingeki ahlupheke isikhathi eside bese ukhetha othi awube, amagama afanele.
Ukwenza Izinto Zibe Lula, ukwethembeka kanye nokukhulumisana evulekile iletha lapho uveza imizwa yabo kwemikhawulo ukufaneleka ngeke abashiye nandaba noma iyiphi intokazi. Kulokhu, ngeke anakekele okushoyo ibinzana. Phela, ngeke kube qotho futhi bangempela. Futhi ngakho kakhulu sikuthokozele konke wobulili fair.
Ngokumangalisayo, lezi zinto amadoda ezingabakhangi
Ulwazi abesifazane: kanjani ukuqonda indoda
Indlela ukuthandana nalo isifazane: umhlahlandlela esenzweni
Amathiphu ezingokoqobo mayelana nendlela ongakusebenzisa ngayo ukulungiselela lwesigameko party yenkampani "Umorina!", Anikezelwe Apreli 1
Indlela ukupheka risotto nge inkukhu izinhliziyo
Amaphilisi valerian. imfundo
Surveying - yimboni yetimayini ngesayensi nobuchwepheshe